က်န္းမာေရးဗဟုသုတ Archives - Page7of7- TheeSayChin
ကွမ်းစားတဲ့ သူတွေ ကျောက်ကပ် ရောဂါမဖြစ်အောင် မုန်လာဥဖြူ နဲ့ ကျောက်ကပ်ဆေးတဲ့ နည်းလမ်းလေး ကွမ်းစားခြင်းဟာ အာရှနိုင်ငံတွေမှာ တော်တော်များများက စားသုံးကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်း ဟိုးရှေးယခင်တွေကတည်းက ကွမ်းစားခြင်းဟာ ရိုးရာဓလေ့တစ်ခုလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဧည့်သည်လာရင် ကွမ်းနဲ့ဧည့်ခံခြင်းဟာလည်း ထုံးတမ်းအစဉ်အလာဆိုရင် မမှားပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်း အာရှအပြင် ဥရောပနဲ့ အနောက်အမေရိကတွေမှာပါ အသင့်စားကွမ်းထုပ်လေးတွေလည်း ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကွမ်းဟာ အရက်၊ နီကိုတင်းနဲ့ ကဖင်းတို့ပြီးရင် စတိုတ္ထမြောက် စွဲလန်းမှုအဖြစ်ဆုံးလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကွမ်းစားခြင်းဟာကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တာ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း အသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကွမ်းဟာ သွားနဲ့သွားဖုံးကို ရောဂါဖြစ်စနိုင်ပါတယ်။ ခံတွင်းမှာ ကြာမြင့်စွာ ငုံထားခြင်းကြောင့်လည်း ခံတွင်းအမြှေးပါးတွေဟာ ပျက်စီရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျောက်ကပ်ကိုလည်း ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။ ကွမ်းစားခြင်းကြောင့် ကျောက်ကပ်ကို် ထိခိုက်လာပြီဆိုရင် ကုသနိုင်မယ့် ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်ကို လူမှုကွန်ယက်ကတစ်ဆင့် […]
ပွေး၊ ညှင်း၊ တင်းတိတ်ကြောင့့် စိတ်ညစ်နေရလျှင် အလွယ်နည်း
ပွေး၊ ညှင်း၊ တင်းတိတ်၊ မြန်မာ့ရိုးရာ သဘာဝ ပျောက်ဆေးနည်း ဆေးဖော်ဖို့ကလည်း အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ ဆေးနည်း ၁။ ကြက်သွန်နီ်ဥသေးတစ်လုံးကို အခွံနွာပြီး ညက်အောင်ထောင်းပါ။ ၂။ ပြီးရင် ကြွေပုဂံလုံးထဲ ထည့်ပြီး သံပရာသီးတစ်လုံးကို အရည်ညစ်ချလို့ ရောဖျော်ပါ။ ၃။ သင့်ရဲ့ပွေးကွက်၊ ညှင်းကွက်၊ တင်းတိတ်ကွက်၊ ဝက်ခြံဖုကို လိမ်းပေးပါ။ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် လိမ်းပေးပါ။ ၄။ ညပိုင်းမှာ မျက်နာကို ရေနွေးနဲ့သန့်စင်ပြီး သနပ်ခါးအမြစ်လိမ်းပြီး အိပ်ပါ။ ငါးရက်လောက် ဆက်တိုက်လုပ်ရင် သင့်မျက်နာဟာ ကြည်လင်ရှင်းသန့်ပြီး ကျက်သရေရှိစွာ လှပနေပါလိမ့်မယ်။ မူရင်းစာရေးသူ၏ အမှာစာ- မယုံမရှိပါနဲ့။ လက်တွေ့ပါ။ ငါးရက်အတွင်း သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ လိမ်းဆေးလို့ဆိုပါတယ်။ အထွေထွေသတင်းများ Unicode ပွေး၊ ညှင််း၊ တင်းတိတ်၊ မြန်မာ့ရိုးရာ သဘာဝ […]
အူူလမ်းကြောင်းရှင်းလင်းဖို့ နှင့် ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ခြင်းတွေကိုလျော့ချဖို့ အပ်မှို
ရွှေအပ်မှိုအကြောင်း ရွှေအပ်မှို သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်က အပ်လိုပဲ ရှည်မျောမျောသေးသွယ်သွယ်ပုံစံရှိပြီး အဖြူရောင်ရှိပါတယ်။မှိုထိပ်ဖူးကလည်းတခြားမှိုတွေလိုတအားကားပြီးကြီးမနေပါ။ အင်္ဂလိပ်လို Golden Needle M u s h r o o m လို့ခေါ်ပြီး ဂျပန်လို E n o k i လို့ခေါ်ပါတယ်။ ရုက္ခဗေဒနာမည်ကတော့ F lam m u l i navelutipes ဖြစ်ပါတယ်။ သစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့ပင်စည်တွေမှာ သဘာဝအတိုင်းပေါက်ရောက်သလို စိုက်ပျိုးလို့လည်းရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရလည်းလွယ်ပါတယ်။ သဘာဝအတိုင်းပေါက်ရောက်တဲ့ရွှေအပ်မှိုကတော့ ညိုရွှေရောင် ရှိပါတယ်။ ရွှေအပ်မှိုဟာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကော တကမ္ဘာလုံးမှာပါ အစားများတဲ့မှိုတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေအပ်မှိုကို ဟင်းရည်လုပ်သောက်တာ၊ ကြော်စားတာ၊ဝက်သားလိပ်ထဲထည့်ကာ ကင်စားတာ၊ဆူရှီထမင်းလိပ်ထဲထည့်စားတာ စသဖြင့် အမျိုးမျိုးလည်းလုပ်စားကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ […]
ခရီးထွက် ကားစီးတိုင်း လူမမာတစ်ယောက်လို့ ဖြစ်သွားရလောက်အောင် မူးတက်၊ အန်တက်တဲ့ လူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ကားစီးရင် ကားမူးတတ်တဲ့ သူတွေ ဒီနည်းလေးကို သုံးကြည့်။ ကားမြင်တာနဲ့ မစီးရသေးဘူး မူးတတ်တဲ့ဲကိုယ်။ မူးရလွန်းလို့ ခရီးဆုံးရောက်ရင် လူမမာလို ဖြစ်တတ်တဲ့ဲ ကိုယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့မှ အဆင်ပြေတော့တယ်။ ဆေးပေါင်းစုံံ သောက်ဖူးတယ်။ ဂျင်းတွေ ဝါးဖူးတယ်။ ချက်တွေလဲ ပလာစတာကပ်ဖူးတယ်။ နည်းပေါင်းစုံလုပ်ဖူးတယ်။ တစ်ခုမှ မထိရောက်ခဲ့ဘူး။ သွေးခုန်နှုန်း စမ်းလို့ရတဲ့ နေရာလေးမှာ ဂျင်းပါးပါးလေး အုပ်ပြီး ခုလို ကပ်ထားတော့မှ ဘာဆို ဘာမှကို မဖြစ်တော့ပဲ၊ တလမ်းလုံးလဲ စားနိုင်သောက်နိုင်၊ ခရီးရောက်ရင်လဲ လူက လန်းလန်းဆန်းဆန်း ဖြစ်နေတော့တယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ၂ ပတ်တခါလောက်ကို ခရီးသွားနေတာကြာပြီ။ ကားမူးတတ်တဲ့ သူတွေကို ကိုယ်ချင်းစာလို့ ပြန် မျှဝေတာပါ။ ကားမူးတဲ့ဒဏ်ကိုကားမူးတတ်တဲ့ သူပဲနားလည်တယ်။ source မူရင်းရေးသားသူ
နေ့စဉ်..ရက်ဆက်ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်ဖြစ်နေတာ ရက်၂၀ကျော်နေပီ ဖြစ်ခါစတပါတ်လောက်အထိ နေ့တိုင်း.ဆေးခန်းသွားပြတယ် မသက်သာဘူး..လေပြွန်ရောင်တာနဲ့.ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်တွဲဖြစ်တော့နေရဆိုး..ဆေးနည်းမိူးစုံ.ဝယ်သောက် ဒါလဲ.မပြောက်ဘူး..ရက်၂၀ကျော်လာတော့.လူကြီးတွေက် စိုးရိမ်လာလို့.အထူးကုနဲ့.ပြတော့.ဒီတိုင်းမဖြစ်ဘူး. ဆိုပြီး.ဆေးရုံသွားဖို့..စီစဉ်နေတုန်း.. အိမ်ကို.ရွာကဦးလေးအလည်ရောက်တာနဲ့ကြုံရော ဦးလေးက.နေဦး ဆေးရုံမသွားသေးနဲ့ဦး သဘောၤရွက် ရေနွေးစိမ်သောက်ကြည့်စမ်း ဆိုတာနဲ့ အာ့နေ့ တနေ့လုးံဝင်သလောက် သဘောၤရွက် ကို ရေနွေးစိမ်သောက်တာညကျ အိပ်နိုင်တယ် ဒါနဲ့ရောဂါ သက်သာတာပဲ ဆိုပြီး နောက်ရက်တွေ ဆက်တိုက်သောက်ပေးတာ ၅ရက်လောက်နေတော့ ချောင်းဆိုး ရင်ကျပ် လေပြွန်ရောင်တာ အရှင်းပြောက်သွားတယ်.. သဘောၤၤရွက်ကို အသုးံပြုပုံက. အရွက်စိုကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အရွက်ခြောက်ကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခွက်ထဲ ထည့် အပေါ်ကနေ ရေနွေးပူပူကို လောင်းထဲ့ပြီး … … မပူမအေးလေးမှာ သောက်လို့ရပီ သောက်ခါစမှာ အရွက်စိမ်းစော် နံနေပေမဲ့ သုးံခွက်လောက် သောက်ပြီး သွားရင် အဆင်ပြေပြေသောက်နိုင်သွားပြီး… ငွေမကုန်ပဲ ရောဂါ သက်သာစေတဲ့ ဆေးနည်းမို့. […]
ကင်ဆာရောဂါကြောင့် သေစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့ဗျာ။ ကင်ဆာရောဂါဖြင့်မသေစေရဆိုတဲ့ ကင်ဆာအဆင့် (၄) ကိုအမြစ်ပါမကျန်အောင် ပျောကင်းစေတဲ့ ဆေးနည်
ကင်ဆာကြောင့်မသေနိုင်ကြတော့ပါဘူး ဒေါက်တာ HEAYTHY LIFE က ပြောတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ သေချာဂရုစိုက်ပေးနိုင်ရင် ဘယ်သူမှ ကင်ဆာကြောင့်သေစရာမလိုတော့ပါဘူးတဲ့ ပထမအဆင့်က သကြားလုံးဝ မစားပါနဲ့ ရှောင်ပါ အဲဒါကင်ဆာဆဲလ်က အလိုလိုသေသွားပါလိမ့်မယ် ဒုတိယအဆင့်က အစာမစားခင်မှာ သံပုရာတစ်လုံးကို ရေနွေးနဲ့ Blend လုပ်ပြီးသောက်ပါ( ၁)လ ကနေ သုံးလခန့် သောက်ပေးပါ … Maryland College of Medicine ရဲ့ Research အရအဲလိုသောက်ပေးတာက ကင်ဆာဆဲလ်ကို ဓာတ်ကင်ကုသတာထက် အဆတစ်ထောင်ကောင်းတယ်တဲ့… တတိယအဆင့်က အုန်းဆီစစ်စစ် သုံးဇွန်းကို မနက်တစ်ခါ ညတစ်ခါ သောက်ပေးပ ကင်ဆာဆဲလ် အလိုလို ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကုသနည်း နှစ်ခုကို သကြားလုံးဝရှောင်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ လိုက်နာနိုင်ပါတယ်။ ဖိုသီဖတ်သီနေရင်တော့ ကင်ဆာဆဲလ်က သင့်ကို အနိုင်ယူသွားပါလိမ့်မယ်။ […]
မိဘတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အမူအယာ (17) ချက်….
မိဘတွေက ကလေးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ငယ်ငယ်လေးတည်းက အသေးအဖွဲကစပြီး စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ ကလေးတွေ ဘာဖြစ်ချင်သလဲ၊ ဘာအဆင်မပြေလဲ ဆိုတာကို မိဘတွေက သိချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်မှာ ကလေး မရှိရင် ဒါတွေ နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ မိဘတွေနဲ့ ကလေးတွေကြား ဆက်သွယ်လို့ရမယ့် အချက်3ချက်ကို ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ကလေး ငိုပုံငိုနည်း ကလေးတွေရဲ့အသက် ပထမ4လမှာ သူတို့ လိုချင်တာကို ငိုပြီးတော့ ဖော်ပြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိဘတွေက ကလေးတွေ ဗိုက်ဆာလို့ ငိုတာလား၊ နာလို့ငိုတာလား၊ တစ်ခုခုဖြစ်လို့ ငိုတာလားဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။ 1. မိဘတွေကို ခေါ်သည့် ငိုနည်း ကလေးတွေက တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေပြီဆိုရင် မိဘတွေကို လာချီစေချင်ပါတယ်။ ကလေးတွေက […]